वुहानबाट फर्किने नेपालीका लागि मंगलबार बेलुकासम्ममा ‘क्‍वारेइन्टाइन, बुधबार स्वदेश ल्याउने सम्भावना – " सुलभ खबर "
वुहानबाट फर्किने नेपालीका लागि मंगलबार बेलुकासम्ममा ‘क्‍वारेइन्टाइन, बुधबार स्वदेश ल्याउने सम्भावना
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार सम्ममा चीनबाट ल्याइने नेपालीलाई राख्‍ने स्थान (क्‍वारेइन्टाइन) तोकिने जानकारी दिएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘सुरुमा क्‍वारेइन्टाइनमा राख्ने हो, परीक्षण नियमित हुनेछ, केही आशंका लागेमा बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखिने छ ।
मंगलबारसम्ममा ठाउँको प्रबन्ध मिलेपछि सम्भवत बुधबार चीनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइने छ। उनले अझै पनि ती ठाउँहरुको अवलोकन जारी रहेको बताउँदै भोली नै तय गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए। उनले एउटा कोठामा २ देखि ३ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई नराखिने पनि जानकारी दिए। सुरक्षा, सुविधा, चिकित्सय टोलीका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको मन्त्रायले जानकारी गराएको छ। हेल्थ इमरजेन्सी अपरेसन सेन्टरका प्रमुख सागर दहालले नेपालको केसमा आजसम्म जम्मा १४ जना कोरोना भाइरस टेस्टका लागि रिपोर्ट गरेकोमा ३ वटा रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको जानकारी गराए।
बिरामीहरुलाई कोरोना भाइरसको बारेमा जानकारी दिनका लागि स्वास्थय मन्त्रालयले सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ। बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म टेलिफोन सम्पर्कमा रहनका लागि डा. रविकान्त मिश्र, डा. युग प्रसाद सापकोटा, डा. समिरकुमार अधिकारी तोकिएका छन्। उनीहरुले रोगका बारेमा जानकारी दिनुका साथै उपचारका लागि कहाँ जाने विषयमा जानकारी गराउनेछन्।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अहिले वृद्धवृद्धाहरुलाई मात्र रोग सर्ने भनिएपनि सबै उमेरका व्यक्तिहरुलाई कोरोना भाइरसको जोखिम हुनसक्ने विश्व स्वास्थय संगठनले जनाएको बताए। त्यसैगरी यसका लागि एन्टिबायोटिक तथा खोपहरु पनि उपलब्ध नभएको बताउँदै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा रहेका अफवाहको पछाडि नलाग्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे।
साथै चीनमा रहेको नेपाली दूतावासले नेपालीलाई फर्काउनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
अहिलेका लागि नेपाली सेनाको नवनिर्मित भवन, सशस्त्र प्रहरी क्याम्प, सरकारका केन्द्रीय अस्पतालका हलहरु, इचंगुनारायणमा सुकुम्बासीका लागि बनाइएको आवास भवन, कीर्तिपुरस्थित आयुर्वे्दिक अध्ययन केन्द्र र भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि तालिम केन्द्रलाई सम्भवित स्थानको रुपमा पहिचान गरिएको छ। वुहानबाट सुरु भएको नोवल कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३६२ पुगेको छ। शनिबार चीनको बेइजिङमा रहेको नेपाली दूतावासले सूचना प्रकाशित गर्दे त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको उद्धार गरिने बताएको थियो।
नेपालले चीनको हुवेइ प्रान्तमा रहेको सबै नेपालीहरुको उद्धार गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण झन् झन् फैलिँदै गएपछि नेपालले हुवेइमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार गर्ने भएको हो। हालसम्ममा १८० नेपालीले स्वदेश फर्किनका लागि फारम भरेका छन्। यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हुवेइमा रहेका नेपालीलाई फर्काउन जहाज तयारी अवस्थामा रहेको बताएका थिए। अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।